Kachasị mma ndị nwoke na -emepụta ejiji larịị pullover hoodies omenala ụmụ nwoke ogologo uwe mkpuchi emeputa na ụlọ nrụpụta | Lọng
Ndị nwoke na -ere ahịa na -ewu ewu na -eji hoodies ụmụ nwoke nwere akwa ogologo
N'iji mkpuchi na -emegharị emegharị, ihe eji achọ mma na flaapụ ihu n'ihu - ọ zuru oke maka njem ọ bụla n'okpuru anyanwụ - ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ka anyị na -enye hoodies pụrụ iche, anyị na -enwe obi ụtọ ịnwale ma mee nlele anụ ahụ maka ndị ahịa anyị inwe ezigbo echiche ma ọ bụ n'ihu .Nke a bụ usoro na -atọ ụtọ n'oge a na -emepụta ya.
Ọ bụ narị afọ nke 21: ọsụsọ abụghị naanị maka ịga mgbatị ahụ. Mee ntụgharị gị kwa ụbọchị na obere nka na nchịkọta hoodies ụmụ nwoke na ọsụsọ. Lebanong na-enye nhọrọ nke akwa ọsụsọ karịrị akarị na mkpuchi mkpuchi dị n'ụdị dị iche iche dị larịị. Nke dị ka mmetụta dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche .N'ụtụtụ, na -eji ọsụsọ na -agba ọsọ na -agba ọsọ, nke na -ekpo ọkụ n'oge ihu igwe oyi, ma ọ bụ n'oge ikuku na -eku.
Hoodies bụ ọrụ dị mkpa ma ị na-akụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ na-ala azụ maka ụbọchị. Site na ụdị ama ama ama ama ama ma ọ bụ ụdị ahaziri nke ọma. Anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị ụdị akwa dị iche iche ka ha họrọ, ihe mejupụtara ya ma ọ bụ ịdị arọ ya. Ahịa America na Europe, akwa dị n'ime ya na -ewu ewu, mana n'ahịa ụfọdụ nke Eshia, frech terry na akwa n'akụkụ na -ewu ewu. N'otu oge ahụ, a na -anabata ajị anụ pola, ajị anụ poly tricot na mba ụfọdụ na ahịa, ụfọdụ ndị ahịa nwere ike chọọ ka anyị nye akwa e biri ebi zuru oke maka ụdị ha dị iche iche, n'ụzọ ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa silk ma ọ bụ ihe mkpuchi.
Ihe:Ndị uwe ojii
Tụkwasịnụ ụdị:Afọ 15 nke ọrụ OEM & ODM
1. Karịrị 100KGS: Site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku
2. Ihe na -erughị 100KGS: Site na awara awara, ọrụ n'ụlọ n'ụlọ
3. Dịka arịrịọ onye ahịa si dị.
1. Kedu mgbe m ga -enweta hoodies m?
Mgbe enyere nkwenye, anyị ga -ahazi ụbọchị nrụpụta dị ka ọnụọgụ gị na oge ịkwụ ụgwọ gị siri dị. Ozugbo ekwenyesiri ike na ụbọchị, 15-25 ụbọchị ọrụ maka mmepụta. Biko echegbula, nzọụkwụ ọ bụla m ga -egosi gị foto.
2. Kedu ka ị ga -esi chịkwaa ịdị mma gị?
ụlọ ọrụ anyị nwere onye na -enyocha ịdị mma otu otu, anyị na -emekwa mkpuchi ihu site na 2000, ogo dị mma, yabụ ụlọ ọrụ anyị na -anọ ebe a.
3. Achọrọ m ịmata nkọwa ndị ọzọ: Gịnị bụ ọnụahịa kacha mma ị nwere ike ịnye?
Daalụ maka ịjụ ajụjụ gbasara okpu. Enwere m ike ịma ụdị gị, enwere m ike ịkepụta gị ma nye gị onyinye kwesịrị ekwesị dịka atụmatụ gị na ihe ị chọrọ si dị.
4. Uru anyị?
1) Onye nrụpụta ọkachamara nwere 3rd njirimara otu
2) Ọrụ OEM & ODM nwere ahụmịhe afọ 21
3) Anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 nwere nka na ụlọ ọrụ
4) Ụdị ụdị dị
5) Anyị nwere ndị ọrụ nka nke anyị, nwere ike mee akara ngosi omenala na imewe ya
Nke gara aga: Uwe ndị na -ere ahịa na -ewu ewu na -ewu ewu
Osote: Ndị Mmebe Nwoke, Ndị Ebipụtara & Ekebere eke